Flim2MM: 2018
၁၉၄၈ ခုနှစ် ကက်ရ်ှမီးယား နယ်စပ် အရေးကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် စစ်ဖြစ်ကြတယ် ။
စစ်တွေ ဖြစ်ရင်း တောတွင်းတစ်နေရာမှာ အိန္ဒိယစစ်သား တစ်ယောက်နဲ့ ပါကစ္စတန် စစ်သား တစ်ယောက် ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ပဲ အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့တယ် ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ စစ်ကူမရှိပဲ တောတွင်းက အိမ်တစ်လုံးမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မယုံမကြည်နဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ် ။
စစ်ပွဲအတွင်းက လူသားဆန်မှုတွေ ၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ၊ သွေးထွက်သံယိုတိုက်ပွဲတွေ ၊ ရယ်စရာဟာသတွေနဲ့ စစ်သားဘဝ အစစ်အမှန်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, History, War
[FILE SIZE]:…………………….….:) 970 MB
Posted by Y Junction at 1:45:00 AM7comments:
Labels: Bollywood, Drama, History, War
ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းအဖိုးကြီး နှစ်ယောက်ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲလေးပေါ့ ...
ဝမ်းရေးအတွက် နေ့စဉ်သွားလာနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကြားက အကြောက်တရားကို ချပြသွားတဲ့ ရုပ်ရှင် ...
[GENRE]:……………………….… .:) Crime, Drama, Mystery
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 44 mins
Posted by Y Junction at 10:32:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 7:30:00 PM5comments:
တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သူတို့ ယောက်ျားတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားဖူးတယ် တဲ့ .....
ခင်ဗျားဟာ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့မိန်းမကို မေးကြည့်ပါ ။
အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ ခင်ဗျားကို သတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ သူစဉ်းစားဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ .....
ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ခင်ဗျား အခုထိ အသက်ရှင်နေလဲ သိလား?
မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားကို ပိုပြီး သည်းခံလာနိုင်လာတယ်တဲ့ ... ဒါကြောင့် ခင်ဗျား အခုချိန်အထိ အသက်ရှင်နေတာပေါ့ .....
ဆူဆန်နာ အန်နာမရင်း ဂျိုဟန်နာ ဆိုတဲ့
သူဌေးမ တစ်ယောက် ယောက်ျား ၆ ယောက်ထိ ယူခဲ့တယ် အကုန်သေကုန်တယ် ။
သူ့ဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ထာဝရအချစ်ကို ရှာဖွေခဲ့တာပါ ၊ အရမ်းအထီးကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။ သူ မွေးကင်းစအရွယ်မှာပဲ သူအမေ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူအရွယ်မရောက်ခင်မှာဘဲ သူ့အဖေ ထပ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အဖေက သူအတွက်တော့ အရာရာပါပဲ သူငယ်ချင်းလို.. အမေလို.. အဖေလို.. အစ်ကိုလို ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ သူအဖေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အဖေလို ယောက်ျားမျိုးကိုတွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တော့ ဆူဆန် ဘဝက
မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ပဲ ဆုံဖို့ ကံပါလာတယ် ထင်ပါတယ် ။
ဆူဆန်နာမှာ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်
အဲဒိနှလုံးသားကြောင့်ပဲ လူ ၆ ယောက်ကို သေနေ့မစေ့ပဲ ကောင်းကင်ဘုံကို စောစောစီးစီး ပို့ပစ်လိုက်တယ်လေ ....
ဆူဆန်ရဲ့ အလှက ကြောက်စရာကောင်းတယ်
ဒါပေမယ့် သူ့ကို အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်မယ့်သူမျိုး .... သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်တွေ သုစရိုက်တွေနဲ့ ဒီကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကို လက်ခံနိုင်မယ် လူမျိုးကို သူရွေးချယ်တော့မယ် ။
အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ၇ ယောက်မြောက် ယောက်ျားပါပဲ .....
[FILE SIZE]:…………………….….:) 953 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 17 mins
Posted by Y Junction at 9:19:00 AM No comments:
Labels: Bollywood, Drama, Mystery, Thriller
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တခြားသူတွေမြင်တဲ့ အမြင်အတိုင်းပဲ နေနေသလား
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁ ကနေ ၁၀ အထိ အမှတ်ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်သလဲ။
အားလုံးခြုံငုံပြီး မညာတမ်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ အထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ အထင်သေးနေတဲ့သူတွေ
တခြားသူကို အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ဝေဖန်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်ဖို့ကျတော့ မဝံ့ရဲတဲ့သူတွေကို
ရိုးသားမှုကနေ သိမ်ငယ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သလို
ရိုးသားမှုကနေ အမှန်ကို ပြန်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရိုက်ထားတဲ့ ဒီ အချစ်ဟာသဇာတ်ကားထဲမှာ ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့ အချက်ကလေးတွေရှာကြည့်ရင်း
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Romance
[FILE SIZE]:…………………….….:) 750 MB
[Translated By]:………….........:) စည်သူထက်
Posted by Y Junction at 7:10:00 AM No comments:
မူရင်း စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ရုပ်ရှင်သုံးသပ်သူတွေ အကြိုက်မတွေ့ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးဆရာကြီး Cornelia Funke ရဲ့ Trilogy လို့ခေါ်တဲ့ British-American-German ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကို စုပေါင်းထားတဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဂျာမန်နာမည်က Tintenherz ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတွေ ရွေးချယ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် စာအုပ်တစ်ရာ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာ Mo (Mortimer) နဲ့ သူရဲ့သမီးလေး Meggie တို့က ဥရောပတခွင် သွားလာနေရင်း မမျှော်လင့်ပဲ Mo ရဲ့ အစွမ်းဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ထဲက စိတ်ကူးယဉ်ခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ (အစွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်ဆိုင်စရာတွေကြုံရပါတယ်။
မိသားစုလိုက် ကြည့်ပျော်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 759 MB
[Translated By]:………….........:) ဇင်အောင်
Posted by Y Junction at 11:32:00 PM No comments:
အကြောင်းအရင်းရှိလို့ အကျိုးဆက် ဖြစ်လာစေပါတယ်...
အဲဒီ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုထဲကပဲ အကျိုးဆက်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်...
ဒီဇာတ်ကားထဲက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း တစ်ခုထဲပါပဲ...
အမဲလိုက်မုဆိုး John Moon ရဲ့ မတော်တဆတွေ့ကြုံမှုကနေ စတင်ပြီး တုန်လှုပ်စရာကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပါပဲ....
ဒီဇာတ်ကားက Tempo တင်တဲ့နေရာမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခေါ်သွားပါတယ်....
အရမ်းအေးလွန်းတယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်....
ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံက ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းထက် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ Emotional State ကို ပိုပြီး ဦးစားပေး ပုံဖော်ထားပါတယ်။
R-rated ဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်ပြည့်သူများသာ ကြည့်သင့်ပါကြောင်း...
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 48 mins
[Translated By]:………….........:) Lotus Black
Posted by Y Junction at 7:23:00 PM No comments:
Killing Machine လို့ တင်စားခေါ်တဲ့ John ကို သူ့ရဲ့သူဌေးက အိတ်တစ်လုံးကို သွားယူခိုင်းပါတယ်။
အိတ်ကို မိုတယ်တစ်ခုရဲ့အခန်းအမှတ် ၁၃ မှာ ယူလာပြီး စောင့်နေရုံပါပဲ။
အိတ်ကို လုံးဝ ဖွင့်မကြည့်ဖို့ပါ။
ကြားမှာ ဒီအိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကြုံပြီး
[Translated By]:………….........:) Tloop
Posted by Y Junction at 1:58:00 AM 1 comment:
အစိုးရနဲ့ ဥပဒေကို စိန်ခေါ်ရအောင် နင်က ဘာမို့လို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေက ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ပုံစံထဲက ဖောက်ထွက်သူများကို တော်လှန်သူ ပုန်ကန်ခြားနားသူလို့ သတ်မှတ်ပေမယ့် ဘာအတွက် တော်လှန်တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျသိတဲ့သူ နည်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ခေတ်သစ်ရဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လို တော်လှန်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးပါ။
၁။ Fear No Evil
၂။ Do what is Right
၃။ Fight For your Right
ခေတ်သစ်အိန္ဒိယ လူငယ်တွေကို ထောက်ပြတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအပိတ်မှာလဲ ရာဘင်ဒြားနတ် တဂိုးရဲ့ အဆိုအမိန့်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Musical, Romance
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 31 mins
Posted by Y Junction at 1:04:00 AM2comments:
"အပိုလို ၁၁ အာကာသယာဉ်သာ လကမ္ဘာပေါ်ကို ပထမဆုံး ခြေမချနိုင်ခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမယ် ထင်သလဲ"
ဒီမေးခွန်းနဲ့ ခေါင်းစားနေတဲ့ အမေရိကန်က အကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့ Plan B လို့ခေါ်တဲ့ အရံထားတဲ့ အစီအစဉ်ကို ကရော်ကမယ် ရူးသွပ်တဲ့ရိုက်ကွက်တွေနဲ့ သရော်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ R-rated အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဟောလီဝုဒ်တို့ CIA တို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ ဗီယမ်နမ်စစ်ပွဲအကြောင်းတို့ စတဲ့ အချက်တော်တော်များများကို ထိထိမိမိ သရော်ထားပါတယ်။ အနုပညာဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာတွေပါ ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
Poster ထဲမှာ ရေးထားသလိုပဲ Based on the true conspiracy theory ပါ။ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူများကလည်း နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် တော်ရုံမကြည့်သူတွေတောင် မြင်တာနဲ့ သိမယ့် သူတွေပါ။
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 47 mins
[Translated By]:………….........:) ကျော်စွာ
Posted by Y Junction at 8:18:00 AM No comments:
ဒီဇာတ်ကားမှာ Poster ကြည့်ကတည်းက တိုက်ခိုက်ခန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေပါတယ်ဆိုတာတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အဓိကပြောချင်တာက ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး Abigail Breslin အကြောင်းပါ။( :P :P :P)
၁၉၉၆ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့ဖွား မင်းသမီးလေးဟာ အရင်က Comedy နဲ့ Drama ရုပ်ရှင်၊ရုပ်သံစီးရီးတွေ မှာ ပိုနာမည်ရနေရာကနေ Wicked Blood လို့ အကြမ်းအရမ်းကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာက ရသတစ်မျိုးခံစားရစေပါတယ်။ "This May Sound Crazy" "Mixtapes & Winter Coats" စတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Forbes Magazine ရဲ့ "Young Hollywood's Top-Earning Stars" စာရင်းမှာ နံပါတ် ၈ နေရာကို ရခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါ။ Little Miss Sunshine (2006) ဇာတ်ကားနဲ့ Academy ဆု စကာတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသာကြီးအကြောင်းကတော့ အထူးပြောမနေတော့ပါဘူး. :P :P :P
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 32 mins
Posted by Y Junction at 10:39:00 PM No comments: